विज्ञ सम्मेलनले नेपालको विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउछ : एनआरएनए अध्यक्ष भट्ट - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
विज्ञ सम्मेलनले नेपालको विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउछ : एनआरएनए अध्यक्ष भट्ट
काठमाण्डौ ४ असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यतिबेला आगामी अक्टोबरमा काठमाडौंमा हुने विज्ञ सम्मेलनको तयारीमा छ। उक्त विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्धेश्यका साथै संघले गरेको पुनर्निर्माणको काम र भावी योजनाबारे अध्यक्ष भवन भट्टलाई अर्थको अर्थको ४ प्रश्न :
प्रश्न नं १– एनआरएनएले विज्ञ संम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्धेश्य के हो ?
मुलुकको विकासका लागि आर्थिक लगानी मात्र प्रर्याप्त हुदैन । विकासका लागि आर्थिक सँगै बौद्धिक लगानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) कोे ठहर रहेको छ । त्यसकारण हामीले विज्ञ सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न लागेका हौं । यसमा हामीले जानेका बुझेका ज्ञानगुनका कुराहरु नीति नियमहरु विभिन्न सिद्धान्तहरुमा लगानीकर्ताहरुलाई के दिन सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने छौं । हामीले ऐतिहासिक रुपमा नेपालमा पहिलो पटक अक्टोबर १२ र १३ तारिखका दिन विज्ञ सम्मेलनको आयोजना गर्दै छौं । यसमा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो स्वामित्व लिएको छ । सम्भवत यसको उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यु आउनु हुनेछ । हामीलाई विश्वास छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा छुट्टै किसिमले सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
प्रश्न २–एनआरएनएले हाल गरेको पुनर्निर्माणको काम के भइरहेको छ । र यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कस्तो प्रतिकृया छ ?
हामीले अहिले गोरखाको लाप्राकमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणको काम गरिरहेका छौं । यस विषउमा प्राधिकरणले पनि सके सम्म छिटो काम सक्न भनेको छ । उहाँहरु यसमा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । प्राधिकारणसंग हाम्रो यो पहिलो कार्यक्रम भएको हुनाले पनि हामीले यसलाई पुर्ण गर्नु नै पर्ने छ । भौगोलिक रुपमा अलि विकट र अबिरल बर्षाको कारण र समयमा नै सामान पु¥याउन नसकेकाले ४० दिन हाम्रो समय लम्बिन पुगेको छ । केही बाधाहरु आएतापनि काम भने द्रुतरुपमा नै अगाडी बढीरहेको छ । आशा छ अव छिटै काम सकिने छ ।
प्रश्न ३– गैरआवसीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विषय कहाँ पुग्यो ?
गैरआवसीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषय संसदमा पुगिसकेको छ । त्यसमा केही क्रुुटिहरु थिए । हामीले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छौं । त्यसलाई सरकारले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
प्रश्न ४– एक वर्ष भन्दा बढीको समय बाँकी छ तर एनआरएनएमा चुनाव लागिसक्यो भन्ने बजार हल्ला छ बास्तविकता के हो ?
त्यस्तो होइन । हामी अहिले संगठनको विभिन्न कामहरुमा सक्रिय छौ । जुन तपाईहरुले पनि देखि रहनु भएको छ ।
तर सबै कुराहरुलाई नीतिले फरक पार्छ । त्यही कारण हामीले संघलाई समय सापेक्ष सुधार र निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले यस पटक विज्ञ सम्मेलनका साथ साथै विद्यानलाई समय सापेक्ष संशोधन पनि गर्दै छौं । त्यसका लागि विद्यान सभा पनि बनाउने हाम्रो योजना छ । यसमा कुनै पनि बाहिरी शक्तिले असर नपार्ने खालको नीति बनाउन जोड दिएका छौं । सम्भवत यसमा सबै साथीहरुको सहभागीता हुन्छ भन्ने मैले बिश्वास लिएको छु ।
राजविराज मालपोत कार्यालयमा प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालन
पाँचथर पावरको आइपीओ बिक्रीको अनुमती
एनआईसी एशिया बैंकको ‘उद्यमशील बचत खाता’ योजना
पुरानो बसपार्कको भ्युटावर निर्माण कार्य सुस्त, महानगरले अवलोकन गर्न स्वतन्त्र इन्जिनियर नियुक्त गर्ने